महिनावारी रोकिनु अगावै गर्भवती भएको कसरी थाहा पाउने ? - Naya Pusta
महिनावारी रोकिनु अगावै गर्भवती भएको कसरी थाहा पाउने ?
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७५ माघ २६, शनिबार १७:४७
काठमाडौँ । महिलाहरु गर्भवती भएको मुख्य सूचक हो महिनावारी रोकिनु । तर, गर्भ बोकेको केही हप्ता बितिसकेपछि मात्रै महिनावारी रोकिन्छ ।जब एग फर्टिलाइज भएर यूटरसमा प्रत्यारोपित हुन्छ, अनि महिला गर्भवती हुन्छिन् ।
यो घटना महिनावारी रोकिनुभन्दा निकै अगाडि हुन्छ । त्यसो भए महिनावारी रोकिनु अगावै गर्भवती भएको कसरी थाहा पाउने ?खासमा गर्भावस्थाको प्रारम्भिक चरणमा नै धेरै किसिमका लक्षणहरु देखिएका हुन्छन् । यिनीहरुलाई बुझ्न सके गर्भ रहेको पत्ता लगाउन सहज हुन्छ । हामी यहाँ ती संकेतहरुबारे चर्चा गर्दैछौं ।
गर्भधारण गरेको १-२ हप्तामा नै स्तनमा परिवर्तन देखिन थाल्छ । यस दौरान स्तनमा दुखाई, भारीपन तथा आकार ठूलो हुन सक्छ ।
यदि तपाईंको मासिक धर्म नियमितरुपमा २८ दिनको साइकलमा हुन्छ भने गर्भ रहेको बेला २०-२४ दिनदेखि नै हल्का रक्तश्राव हुन थाल्छ । यसलाई इम्प्लान्टेसन ब्लिडिङ पनि भनिन्छ ।
यतिबेला तपाईंलाई पहिले अत्यधिक मन पर्ने खानेकुरा रुच्न छोड्छ । त्यसको बास्ना र स्वाद मन पर्दैन । लगभग ८५ प्रतिशत महिला सुरुवाती ३ महिनामा यस्तो स्थितिबाट गुजि्रन्छन्।
गर्भावस्थाका दौरान रक्तचाप कम हुन्छ । यसले गर्दा चक्कर लागिरहन्छ । सुरुवाति तीन महिनामा यस्तो अत्यधिक हुन्छ । दोस्रो त्रैमासिकमा रक्तचाप सामान्य अवस्थामा आउँछ।
ब्राजिलको फुटबल क्लबमा आगलागी, १० जनाको मृत्यु
मनमा आउँछ तर मुखमा आउँदैन ! यस्तो किन हुन्छ ?
यसरी गराैँ सुत्नुअघि कपालको हेरचाह
प्रेमको मामलामा सधैं सफल हुन्छन् यी चार पुरुष
कपालमा अदुवाको प्रयोग गर्दा मिल्छ यस्तो चमत्कारी फाइदा